ဗို့အားတိုင်းကိရိယာ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းရှိ အချက် ၂ ချက်အကြား လျှပ်စစ် ပိုတင်ရှယ်ခြားနားချက်ကို တိုင်းတာရန်အသုံးပြုသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Analog voltmeter သည် circuit ၏ voltage နှင့် အချိုးအစားအတိုင်းအတာကိုဖြတ်ပြီး pointer တစ်ခုကိုရွှေ့သည်။ ...
ယနေ့မိုးများမည်၊ နက်ဖြန်လေမုန်တိုင်းကျမည် အစရှိ သဖြင့် ရာသီဥတုအခြေအနေကို မိုးလေဝသဌာနမှ ကြိုတင် သတိပေးနိုင်ခြင်းသည် ဗရိုမီတာဟုခေါ်သော လေဖိတိုင်း ကိရိယာ၏ ကျေးဇူးကြောင့်လည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဗရိုမီတာ ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဂရိစကားမှ ဆင်းသက် လာ၍ ဖိအားတ ...
သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းစနစ် သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိ သတင်းအချက်လက်များကို ရယူဆန်းစစ်ပြီး မြင်သာထင်ရှားသည့် ပုံစံများဖြင့် ပြသရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
ဂီယာ ဆိုသည်မှာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာ တစ်ခု အတွင်းတွင် ပါရှိသော ကိရိယာဖြစ်ပြီး အခြားဂီယာ သို့မဟုတ်ကိရိယာများသို့ လည်အား ကို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဂီယာနှင့် စက်သီးတို့ ကွဲပြားခြားနားချက်မှာ ဂီယာသည် စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌန်ပင် ဖြစ်သ ...
အပူကူးပြောင်းခြင်း သည် အပူပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များထဲက ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အရာဝတ္ထုများ စနစ်များကြားရှိ အပူစွမ်းအင် ဖလှယ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင ...
ရွှေစံချိန်စံနစ် ဆိုသည်မှာ ရွှေအလေးချိန်နှင့် အမျိုးအစား ကို မူတည်သော ငွေကြေးအခြေခံစံနှုန်းကို ဖော်ပြသည့်ငွေကြေး စံနစ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ထိုရွှေစံချိန် စံနစ်အရဆိုမူ ရွှေကို လွတ်လပ်စွာ ဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်နိုင်၍ ရွှေဒင်္ဂါးများကို တရားဝင်ငွေ အဖြစ် သုးစ ...
မိုးမျှော်တိုက် ဆိုသည်မှာ မြင့်မားပြီး လူနေနိုင်သော အဆောက်အဦးများ ဖြစ်ပြီး အထပ် ၄၀ ထက်မက ပို၍ မြင့်မားကာ ရုံးခန်းများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် လူနေထိုင်ရန် တို့ အတွက် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။ မိုးမျှော်တိုက်များကို အထပ်မြင့် တိုက်များဟုလည်း ခေ ...
သိပ္ပံပညာရပ်များပေါ် ထွန်း၍ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ ထွန်း ကားလာသည့် ယခုခေတ်တွင် မြို့ကြီးပြကြီးများ၌ လူနေ အိမ်ခြေ တိုးတက် ထူထပ်လာလေသည်။ ဤသို့ မြို့ကြီးပြကြီးများ ၌ လူနေများ၍ စည်ကားလာသည့်အလျောက်လည်း အုပ်ချုပ်သူ တို့အဖို့ ပို၍ ပြဿနာများလာသည်။ မြိ ...
လေကြောင်းနှင့် အာကာသ ပညာ သည် လေကြောင်းနှင့် အာကာသ ခရီးသွားခြင်း နှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော သုတေသန ပြုမှုများ အစရှိသော ကျယ်ပြန့်သော ပညာရပ် နယ်ပယ်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ ပညာသည် အလွန် ကျယ်ပြန့်သော နယ်ပယ် ဖြစ်ပြီး အားလုံးသော လူသ ...
ပီအယ်လ်စီ ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားလုံး programmable logic controller များကို အတိုကောက် ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပီအယ်လ်စီများကို ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ဓာတု လုပ်ငန်းများ၊ ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းများ၊ သင်္ဘောများ စသည်တို့၏ ထိန်းချုပ်စနစ်များ အ ...
ဖီးဒ်ဘတ်စ် ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ အချိန်နှင့် တပြေးညီ အလုပ်လုပ်သော ဖြန့်ကျက် ထိန်းချုပ်မှု စနစ် များတွင် အသုံးပြုသော စက်ရုံအလုပ်ရုံသုံး ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက် ပရိုတိုကောလ် မိသားစုဖြစ်ပြီး ယခုအခါ IEC 61158 ဖြင့် စံသတ်မှတ်ထားသည်။ ရှုပ်ထွေးပြီး အလိုအလျောက် မော ...
နျူမက်တစ်ကိရိယာဆိုသည်မှာ လေဖိအားကို အသုံးပြု သော ဖြတ်စက်၊ ဖောက်စက်စသည့် ကိရိယာတို့ကိုဆိုလိုသည်။ နျူမက်တစ်ကရိယာ စီမံထားပုံသဘောမှာ ပြွန်တစ်ခုအတွင်းသို့ အံကိုက်ဝင်နိုင်သော ပြွန်ကျပ်တစ်ခုကို တပ်သွင်း၍၊ တစ်ဖက်မှ လေအားဖြင့် တွန်းပေးရာတွင် ပြွန်ကျပ်သည် ...
ပြသာဒ် တံတိုင်း ခုနစ်ထပ် အတွင်းဝယ် အသင်ရှင်သော လူယောကျာ်းများကဲ့သို့ သစ်သားဖြင့်ပြီးသည့်ယန္တရားစက်ရုပ်တို့ ရှိကြ၏။ ထိုယန္တရားစက်ရုပ်တို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း သောလက်နက်တို့ကို စွဲကိုင်လျက် လူကဲ့သို့ ပြေးလွှားကာ စောင့်ကြည်နေကြ၏ ဟူ၍ အံ့ဩဖွယ် ရှေးယ ...
အော်တိုမေးရှင်း သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အမျိုးမျိုးသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူတို့၏ အားစိုက်ထုတ်မှုကို အနည်းဆုံး အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ် လျော့ချခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ စက်ကိရိယာများ၊ စက်ရုံများ အတွင်းရှိ ...
တတိယအဖွဲ့အစည်း Q.C Organization ဆိုသည်မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း Third Party အဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ၂၀၁၇၊ ဇန်နဝါရီလရက်တွင ...
ကိရိယာဟူသည် အရာဝတ္တု တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကိရိယာအား တစ်စုံတစ်ခုသော ကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးချသည်။ လူတို့အတွက် တစ်စုံတစ်ခုအား ဖန်တီးရန် ပြင်ဆင်ရန် အတွက် ကြားခံ ပစ္စည်း အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ဥပမာ-ကက်ကြေး၊ဓား၊ ဝက်အူလှည့်တံ၊ပလာယာ။ ၎င်းအပြင် ရည်ရွယ်ချက် တစ် ...
ခနွှဲသည် နှီးသစ်သားစသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လက်ကိုင်ရိုးတပ်ထားသည့် ရေပက်ခွက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည့် ခနွှဲပုံနှစ်မျိုးရှိသည့် တစ်မျိုးမှာ ထောင့်သုံးစွန်းထွက်နေသော ခွက်ပက်လက်ဖြစ် ကျန်တစ်မျိုးမှာ ဝါးလုံးထက်ခြမ်းခွဲ သဏ္ဌာန် ပြုလုပ်ထားသော ပုံ ဖြစ်သည်။ ခန ...
ဇာဂနာသည် ၁၉၇၉-ခု၊ ဩဂုတ်လထုတ်မြန်မာအဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ်၊ အတွဲ ဆ-န၊ စာမျက်နှာ-၄၅ တွင် ဇာဂဏာ ဟုရေးသည်။ ဇာဂနာသည် သေးငယ်သော ပစ္စည်းလေးများအား ညှပ်၍ ယူနိုင်ရန်အတွက် တီထွင်ထားသော ကိရိယာ အသေးစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မွေးညှင်းများအား ညှပ်ယူနိုင်သောကြောင့် မွေးညှပ် ...
ယာဉ်များ တစ်နာရီလျှင် မည်သည့်နှုန်းဖြင့် သွားနေသည်ကို ပြသောကိရိယာကို စပီဒိုမီတာဟုခေါ်သည်။ ယာဉ်အမျိုးမျိုးတွင် စပီဒိုမီတာအမျိုးမျိုး ရှိကြသော်လည်း၊ ဂါဗနာဖြင့်ထိန်းသော စပီဒိုမီတာနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ဖြင့် ထိန်းသော စပီဒိုမီတာတို့ကို အများအပြား အသုံးပြုက ...
နေရောင်ကို ပရစ်ဇမ်ခေါ် သုံးမြေ|ာက်ဖန်တုံးဖြင့်ခံ၍ကြည့် လျှင် ဖန်တုံးထဲက ဖြတ်ထွက်လာသောနေရာသည် မူလ နေရောင်အဖြူရောင် မဟုတ်တော့ဘဲ၊အနီ၊ လိမ်မော်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ မဲနည်၊ ခရမ်းဟူ၍အရောင်ခုနစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ် လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းသို့ထွက်လာသော အရောင် ခ ...
ဝါရှာဆိုသည်မှာ နပ်တိုင်တွင် နပ်ကျတ်သောအခါ အလယ်မှ ခံရသော အဝိုင်းပြားလေးကို ခေါ်သည်။ ဝါရှာခံခြင်းအားဖြင့် နပ် ပြန်လည်ဖြုတ်သောအခါတွင် လွယ်ကူစွာဖြုတ်နိုင်သည်။ အောက်ခံပစ္စည်းအားလည်း အထိအခိုက်နည်းပါးစေ၏။ ဝါရှာပြားများသည် နပ်တိုင်ပေါ်မူတည်ကာ အရွယ်အစားအမ ...
လူမျိုး.အင်္ဂလိပ် ။ တိုးတက်မှူရလဒ်.ယနေ့ခေတ် ကင်မရာများ ။ ရည်ရွယ်ချက်.အမြဲစွဲထင်မယ့် ပုံရိပ်များဖန်တီးရေး ။ တီထွင်သူ.ဝီလျံတောလ်ဘော့စ် ၊ လူးဝစ်စ် ဒက်ဂူရီ ။ ခုနှစ်.၁၈၃၅ ၊ ၁၈၃၉ ။
လေထဲ၌ သွားလာပျံသန်းနိုင်သော လေယာဉ်ပျံများ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရှေးဦးစွာ လမ်းထွင်ပေးလိုက်သည့် နေ့ကား ခရစ် ၁၇ဝ၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ အန်နိုနေးမြို့အနီးရှိ ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခု၌ ကြီးမားသော လူထု ကြီးကို တွေ့မြင်ရလေ ...
အချိန်၏သမိုင်းအကျဉ်း: မဟာပေါက်ကွဲမူမှ တွင်းနက်များ စာအုပ်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဗြိတိသျှလူမျိုး ရူပဗေဒပညာရှင် စတီဖင်ဟော့ကင်း ရေးသားခဲ့သော လူကြိုက်များသည့် သိပ္ပံစာအုပ်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း အုပ်ရေပေါင်း ၁၀ သိန်းကျော်ရောင်းခဲ့ရကာ အရောင်းရဆုံး ဖြစ် ...
ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ စာအုပ်ကို မော်လီကျုးဆိုင်ရာ ဇီဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သော ဒေါက်တာဂျွန်မက်ဒီးနားမှ ရေးသားထားပါသည်။ စာအုပ်နာမည် အပြည့်အစုံမှာ "Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School" ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်မည်သို့ ...
ပညာသင်ကြားရေးတွင် စိတ်ပညာသည် အကျုံးဝင်နေခဲ့ရာ စိတ်ပညာပါရဂူများသည် ကျောင်းများ၌ ပညာသင်ကြားနေသော ကလေးများ၏စိတ်ဓာတ်ကို အထူးသဖြင့် ဝေဖန်စစ်ဆေး စုံစမ်းလျက် ရှိ၏။ အတန်းတစ်တန်းရှိ ကျောင်းသားများထဲ၌ အချို့ကျောင်းသားများသည် အတူတူစာသင်ကြားနေရသော်လည်း စာမလိ ...
တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် သည် လူအများကြည့်ရှုနိုင်‌စေရန် တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကို ပြသထား‌သော ‌နေရာဖြစ်သည်။ ထို ဥယျာဉ်တွင် တိရစ္ဆာန်များကို သူတို့ဘာသာဘဝအတိုင်း လွတ် လပ်စွာ‌နေထိုင်ရန် တတ်နိုင်သမျှစီမံဖန်တီးထားသည်။ တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်တွင် တိရစ္ဆာန်များကို ‌မွေးမြ ...
မှုခင်းသိပ္ပံ ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံပညာအား ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် တရားမကျင့်ထုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့တွင် အသုံးချခြင်း ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ရာဇဝတ်မှုခင်းများကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းရာတွင် အသုံးချလေ့ ရှိပြီး လက်ခံနိုင်လောက်သော သက်သေအထောက်အထား နှင့် ရာဇဝတ်မှ ...
အဆိုပြုရှင်းလင်းချက် ဆိုသည်မှာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆိုပြုထားသော ရှင်းလင်းတင်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျ အဆိုပြုရှင်းလင်းချက် တစ်ခုဖြစ်ရန်အတွက် လက်တွေ့စမ်းသပ်လို့ရသည့် သိပ္ပံနည်းကျ နည်းလမ်းများ လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆိုပြုရှင်းလ ...
ပြဒါး သာမိုမီတာ ကို ၁၇၁၄ တွင် အမ်စတာဒမ်မြို့တွင် ရူပဗေဒပညာရှင် ဒန်ညယ် ဂါဘရီး ဖားရင်ဟိုက်က တီထွင်ခဲ့သည်။ အဝကျဉ်းဖန်ပြွန်ကို ပြဒါးပါဝင်သော ဖန်လုံး တစ်ခုတွဲဆက်၍ တပ်ဆင်ထားသည်။ ပြဒါး၏ ထုထည်သည် ဖန်လုံးအတွင်းပိုင်းထုထည်ထက် အလွန်နည်း၏ ။ ပြဒါးထုထည်မှာ အပူ ...
သာမိုမီတာ သည် အပူချိန် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အပူ/အအေး ပြောင်းလဲမှုကို တိုင်းတာသော ကိရိယာဖြစ်သည်။ သာမိုမီတာတွင် အရေးကြီးသော အခြေခံအခြင်းအရာနှစ်ရပ် ပါရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ အပူချိန်ကို အာရုံခံသည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်၍ ဥပမာ ပြဒါး သာမိုမီတာတွင် ပါရှိသော ဖန်လုံး မျ ...
အနီအောက်ရောင်ခြည် အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ အနီအောက်ရောင်ခြည် သာမိုမီတာ တိုင်းတာခံရသည့် အရာဝတ္ထုမှ ထုတ်လွှင့်သော အနက်ထည် အပူဖြာထွက်ခြင်း ဟုခေါ်သော အပူလှိုင်းဖြာထွက်ခြင်း၏ အပိုင်းတစ်ခုကို ယူငင်ထားသော အပူချိန်ကို တွက်ချက်၍ အဖြေထုတ်ပေးသည့် သာမိုမီတာအမျို ...
အယ်လ်ကိုဟော အရက်ပြန် သာမိုမီတာ သည် ပြဒါး သာမိုမီတာ၏ ပုံစံတူ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာဖြစ်ပြီး တူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ပြဒါး သာမိုမီတာနှင့်မတူဘဲ အယ်လ်ကိုဟော သာမိုမီတာရှိ ပါဝင်ပစ္စည်းသည် အဆိပ်သင့်နိုင်မှု ပို၍နည်းပါးပြီး အငွေ့လည်း ...
ချားလ်စ်ဒါဝင် ကို ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ် သီအိုရီ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျော်ဇောထင်ရှားသူဖြစ်သည်။ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၀၉ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ရှရူဘူရီ တွင်ဖွားမြင်သည်။ အသက်၁၆နှစ်တွင် အီဒင်ဘတ်တက္ကသိုလ် တွင် ဆေးပညာကို စတင်သင်ယူသည်။ သို့သော် ဆေးပညာနှင့် ခန္ဒ ...
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဓာတုဗေဒပညာရှင် ဂျိမ်းစ် ဘတ်ခ်ျအယ်လာ ဆမ်းနားကို နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ မက်ဆာချူးနယ်မြေ၊ ကန်တုန်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဘိုးဘွားများမှာ အင်္ဂလန်မှလာရောက်နေထိုင်သူများဖြစ်တယ်။ အသက် ၁၇ အရွယ်တွင်အမဲလိုက်စဉ် ဘယ်ဘက်လက်မ ...
၁၉ ရာစုအစလောက်တွင် လူသိအများဆုံးဖြစ်ခဲ့သော အနာတမီပညာရှင် ရှော့ရှကူး ဗီယေသည် ၁၇၆၉-ခု၊ ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ် နိုင်ငံ မွန်ဗေးလျားမြို့၌ ဖွားမြင်လေသည်။ ငယ်စဉ်ကပင် သဘာဝသမိုင်းပညာရပ်၌ စိတ်ဝင်စားခဲ့၏။ ကူးဗီယေသည် စတတ်ဂတ်တက္ကသိုလ်တွင် ၄ နှစ်မျှ ပညာ ...
ဂျွန်ဗာဒွန်ဆန်ဒါဆင်ဟောလဒိန်းသည်မျိုးပွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပညာဘက်တွင် ထင်ရှားသော ဗြိတိသျှအမျိုးသား သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ဖခင်ပါမောက္ခဂျွန်စကော့ဟောလဒိန်း သည်လည်း နာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာ ရှင်တစ်ဦးဖြစ်၍ ဦးရီးတော်လော့ဟောလဒိန်း သည်လည်း ထင်ရှားသောဗြိတိသျ ...
စတီဖင်သည် စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ ရာသီဥတုသုတေသနပညာရှင်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ခုံမင်စွာလေ့လာခဲ့သည်။၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် လေထုသုတေ သနပြု အမျိုးသားဗဟိုဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု ဖြစ်စဉ်သည် အ ...
စီဗီ ရာမန် သည် အိန္ဒိယသိပ္ပံသမိုင်းတွင် အထင်ရှားဆုံးပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဂုဏ်ဆောင်ရန် အတွက် ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပထမဆုံး နိုဗယ်ဆုကို ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူတီထွင်ခဲ့သော "Raman Effect" သည် ရူ ...
သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သော အီမန်းနျူအယ် ဆွီဒင်ဗော့ သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ဟုမ်းမြို့၌ ဖွားရာဇာတိရှိသည်။ ယင်း ၏အမည်မှာ ဆွီဒင်စကားဖြင့် ဆွေးဒင်ဗောရီဟု အသံထွက် သည်။ ဖခင်မှာ ခရစ်ယန်ဂိုဏ်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးဖြစ် လေရာ၊ သူသည် သာသနာရေး ခေါင်းဆောင်တစ် ...
ဒမီသရီ အီဗန်နိုဗစ် မန်းဒယ်လိယပ် သည် ရုရှလူမျိုး ဓာတုဗေဒပါရဂူတစ်ဦးဖြစ်၍ ခရစ် ၁၈၃၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဆိုက်ဗီးရီးယားနယ်၊ တိုဗော့မြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ရုရှား ဓါတုဗေဒ ပညာရှင် နှင့် တီထွင်သူ အဖြစ် ကျော်ကြားသော ဒမီသရီ အီဗန်နိုဗစ် မန်းဒယ်လိယပ် ...
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက် ဇာတိဖွားဖြစ်သူ ဒယ်နီရယ်လ်ဘဲလ်သည်၂၀ ရာစုတွင် အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းစာအုပ်နှစ်အုပ်မှာ သတင်းအချက် အလက် နည်းပညာများ က စီးပွားရေးလောကကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပုံကို ဖော် ညွှန်းထားသော The Comin ...
ခေတ်သစ် ဓာတုဗေဒဖခင်ကြီး ဟူ၍ အမည်တွင်ခဲ့သူ သိပ္ပံပါရဂူကြီး လဗွာစီယေကို ၁၇၄၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရစ်မြို့တော် ၌ ဖွားမြင်ခဲ့၏။ သူ၏ဖခင်မှာ ရှေ့နေတစ်ဦး ဖြစ်လေသည်၊ လဗွာစီယေသည် ဖခင်၏ ခြေရာအတိုင်း ဥပဒေပညာကို သင်ကြားခဲ့သော်လည်း သ ...
ဗြိတိသျှလူမျိုး ဓာတုဗေဒပညာရှင် ဆာဝီလျံရမ္မဆေးသည် ၁၈၅၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် စကော့တလန် ပြည် ဂလပ်စဂိုးမြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ ဂလပ်စဂိုးမြို့နှင့် ဂျာမဏီ နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၈၈၇ ခုနှစ် အထိ ဗရစ္စတိုတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်း ...
ကမ္ဘာမြေ၏ သိပ်သည်းခြင်းကို အဦးဆုံး စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့သူဟု ထင်ပေါ် ကျော်စောသော ဟင်နရီကဗင်းဒစ်သည် တတိယဒျူဘွဲ့ရ ဒက်ဗွန်ရှိုင်ယာမြို့စား၏ တူတော်သည်။ ၁၇၁၃ ခု အောက် တိုဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် နီးစမြို့၌ ဖွားမြင်၍ ကိမ်းဗရစ် တက္ကသိုလ်၌ သင်္ချာနှင့် ရူပဗေဒပညာရပ်မ ...
ပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင် အန်ထော်နီလောရင့် ဒီ လဗွိုင်စီယာ အင်္ဂလိပ်: Antoine De Lavoisierသည် ခေတ်သစ်ဓာတုဗေဒ၏ ဖခင်ကြီးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်သည်။ ၁၇၄၃ ခုနှစ်တွင် ပါရီ၌ ၎င်းကို မွေးဖွားလာချိန်က ဓာတုဗေဒသိပ္ပံမှာ ရူပဗေဒ၊ သင်္ချာ၊ နက္ခဗေဒ ပညာရပ်များထက် ...
ဘယ်လ်ဂျီယမ်လူမျိုး ခန္ဓာဗေဒပညာရှင် အန်းဒရိယ ဗီဆေး လိယပ်သည် ယခုခေတ် ခန္ဓာဗေဒ ပညာရေးစံနစ်ကို စတင် တီထွင်သူ ဖြစ်သည်။ ဗီဆေးလိယပ်ကို ၁၅၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ တွင် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ လူးဗန်း၊ ကိုလုန်း၊ မွန့်ပဲလီးယေးနှင ...
အဋ္ဌမအကြိမ် - ရင်ချင်းဆက်? ၊? ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ တတိယအကြိမ် - မိုးပပမောင်၊ မိုးပပအောင် တင်ပဆုံအရိုးကွင်းဆက် ၂၀၀၂ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့ သတ္တမအကြိမ် - အောင်ခန့်ကျော် ၊ အောင်မြတ်ကျော် တင်ချင်းဆက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့ ဆဋ္ဌမအကြိမ် - ရန်ကင်း ၊ ...
မူလသွားများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးကြောပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ နုတ်ပေးခြင်းနှင့်သွားတုများကိုစိုက်ပေးခြင်းစသော အတတ်ပညာကိုသွားစိုက်ပညာဟုခေါ်သည်။ သွားစိုက်ပညာသည် ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးများ လက်ထက်မှစ၍ ပေါပေါက်လာသောရှေးအတတ် ပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဆေးဘက်ဆ ...
သူနာပြုအတတ် သည် မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတည်းဟူ သောဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးအပေါ်အခြေခံထား၍ ဝေဒနာရှင်တို့အား ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ ပြုစုလုပ်ကိုင်ပေးရသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ်မှစတင်ခဲ့လေသည်။ ယင်းအတတ်သည် လူမှုရေးရာတွင် အရေ ...
ပြန်လည် အသုံးချနိုင်သည့် စွမ်းအင်
အလယ်၌ ရေငန်အိုင်ရှိသော သန္တာကျောက်ကျွန်း
ဧရိယာအလိုက် ဥရောပနိုင်ငံများ စာရင်း
ဂီရိ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း
၂၀၀၄ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ငလျင်
ပုပ်ရဟန်းမင်း ဒုတိယမြောက် ဂျွန်ပေါလ်
ညွှန်ကြားလွှာ အမှတ် (၉၄)